रोचक – AB Sansar
March 14, 2022 Ab - NewsLeaveaComment on म मेरो आफ्नै दिदिसँग विवाह गर्न चाहन्छु, तर आमाबाबुलाई कसरी भन्नु थाहा छैन
म २२ वर्षको मान्छे हुँ। म एकदमै जटिल परिस्थितिमा फसेको छु। वास्तवमा, म मेरो वास्तविक दिदिसँग प्रेममा परेको छु, जो म भन्दा चार वर्ष जेठी छिन्। उनले मलाई धेरै माया गर्छिन्। हामी बीचको नाता दाजुभाइ र दिदीबहिनीको भन्दा बढी छ। म तिमीबाट लुकाउन चाहन्न, वास्तवमा हामी बीच शा’री’रिक स’म्बन्ध पनि छ। हामी दुबै एकअर्काको यति […]
March 13, 2022 Ab - NewsLeaveaComment on सुरक्षा पन्तलाई कसले फोन गरेर सोध्यो – तिम्रो एक रातको रेट कति हो ?
नायिका सुरक्षा पन्तले आफूमाथि भएका यौ’ ‘नज’न्य दु’व्र्य’वहा’रको विषयमा खुलेर बोलेकी छन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले सानैदेखि दु’व्र्य’व’हा’रको शि’कार बनेको र चलचित्र क्षेत्रमा आएपछि समेत त्यो जारी रहेको बताइन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा सुरक्षाले भनिन्, ‘हामी पनि सानैदेखि ह्या’रेस’मे’न्टको पार्ट भइरहेकै हो । सानोतिनो घटना भइरहेका हुन्छन् ।’ उनले एउटा घटना सुनाइन्, ‘अलि सानो […]
March 9, 2022 Ab - NewsLeaveaComment on रुखमा डेरा बनाएर भर्चुअल कक्षामा सहभागी छात्रलाई वर्ष चर्चित विद्यार्थीको उपाधि
कोभिड–१९ को महामारीका बेला रुखमा डेरा बनाएर भर्चुअल कक्षामा सहभागी बनेर चर्चा कमाएका खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० अर्खौले नवलपुर सिम्लेका छात्र धनकुमार मगरलाई उनी अध्ययनरत विद्यालयले वर्ष चर्चित विद्यार्थीको उपाधि प्रदान गरेको छ । सरस्वती मावि अर्खौलेमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र मगरलाई कोभिड–१९ को महामारीका समयमा विद्याल बन्द हुँदा रुखमा टाँड बनाएर भर्चुअल कक्षामा […]
March 7, 2022 Ab - NewsLeaveaComment on संसारको सबैभन्दा खतरनाक रूख : झुक्किएर फलको टुक्रा चुसे मृत्यु, दाउरा बाले आँखा फुट्ने
काठमाडौ । पृथ्वीमा विषालु बिरुवा, फलफूल र तरकारीको कमी छैन । हाम्रो वरपरका क्षेत्रमा यस्ता धेरै फलफूल पाइन्छन्, जसको सेवन खतरनाक साबित हुन सक्छ।संसारको सबैभन्दा खतरनाक रूखवर्षामा रुखमुनि उभिएर बसेको बेला फलसँग जोडिएको पानी झर्यो र तपाईको अंगमा पर्यो भनेपनि त्यसको विष लाग्छ । मानशिनील रुख यति विषाक्त हुन्छ कि वर्षामा यसको मुनि उभिदा छाला […]
February 27, 2022 Ab - NewsLeaveaComment on सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छन महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउनुपर्ने
एजेन्सी । भनिन्छ : मानव जीवनलाई सफल बनाउनका लागि चाहिने आधारहरु मध्ये यौ’न पनि एक हो । यौ’न मानव जीवनको एक नियमित प्रकृया भएका कारण यो कुनै जटिल वा फराकिलो विषय होइन, जति आम मानिसले यसलाई कठोर सम्झि’रहेका छन् । यौ’नलाई मानिसले जति अप्ठेरो रुपमा सोच्दै जान्छ त्यो उतिनै अप्ठेरो मोडतर्फ प्रवेश गर्छ । यद्यपी […]
February 26, 2022 Ab - NewsLeaveaComment on को हो उपाध्याय, कसरी भए जैसी ? यस्तो छ – खत्री, क्षत्री र हमाल थरको रोचक प्रसंग
नयाँ पुस्ताका लेखकका लागि पुरातत्वविद् जनकलाल शर्मा त्यति परिचित नहुन सक्छन् तर, नेपाली समाजको पिँधसम्म पुगेर, त्यसको जरा खोतलेर आलोचनात्मक चेतसहित लेख्न चाहने लेखक अनि पाठकले पढ्नैपर्ने एउटा किताब हो शर्माको ‘हाम्रो समाज ः एक अध्ययन’। साझा प्रकाशनले २०३९ सालमा छापेको यस पुस्तकमा पृथ्वीको सृष्टिदेखि आजको नेपाली समाजसम्मको नालीबेली सरल र सरस भाषामा लेखिएको छ […]
गायिका रचना रिमाल मुसुक्कै यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले भुसुक्कै रचनालाई ‘लभ यु’ भनेपछि…
February 21, 2022 santoshLeaveaComment on गायिका रचना रिमाल मुसुक्कै यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले भुसुक्कै रचनालाई ‘लभ यु’ भनेपछि…
धनगढीः सामाजिक सञ्जालमा अचेल प्रायः सबै सक्रिय हुन्छन्। त्यसमाथि फेसबुक र टिकटकमा त केटाकेटी, युवायुवतीदेखि बुढापाका सम्मका सबै उमेर समूहका मान्छेहरु सक्रिय भइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा फेसबुक र टिकटक नचलाउने सायदै भेटिएलान्। फेसबुकले गर्दा कयौ राम्रा सन्देशमुलक कामहरु पनि हुने गरेका छन्। एक अर्कासँग सहजै वार्तालाप लगायतका थुप्रै यसका बिशेषता छन्। तर, पछिल्लो समयमा यसको […]
जथाभावी फालिएका चुरोटका ठु,टा उ,ठाउन कागलाई तालिम
February 20, 2022 santoshLeaveaComment on जथाभावी फालिएका चुरोटका ठु,टा उ,ठाउन कागलाई तालिम
मानव जातिले अत्यधिक फोहर सृजना गरेको छ, जसका कारण सम्पूर्ण ग्रहलाई एउटा समस्या बनेको छ । निश्चिय नै फोहर पन्छाउने अनगिन्ति विधि छन् । फोहरको प्रकृतिअनुसार पुनः नविकरण, पुनःप्रयोग र अन्य विधिबाट यसको व्यवस्थापन गरिन्छ । फोहर व्यवस्थापनकै कुरा गर्दा हामीले फोहरलाई डस्टबिनामा फाल्ने जस्तो आधारभूत कुरामा प्रर्याप्त ध्यान दिँदैनौै । सार्वजनिक स्वास्थ बिग्रनु, ढल […]
यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भा’इरल, रहर कि बाध्यता? (भिडियो)
February 18, 2022 santoshLeaveaComment on यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भा’इरल, रहर कि बाध्यता? (भिडियो)
एजेन्सी । निकै नै सुन्दर एक युवतीको होटेलमा एक विदेशी युवकको साथ रेकर्ड भएको भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ती युवती कुनै होटेलको विस्तारमा युवकसँगै छिन ।हिन्दी भाषा प्रयोग गरेका सो युवकले यसरी भिडियो खिचिरहँदा पनि उनि मस्तले केटाकै अँगालोमा बाँधिएर विस्तारामा रमाइरहेकिछिन् । बेला बेला अर्कि नेपाली दिदीलाइ सम्बोधन गर्दै हेर्नु न यस्ले […]
माइकल ज्याक्सन किन अर्लाम लगाएर से’क्स गर्थे ? थाहा पाउनुहोस् उनीबारे २१ रोचक तथ्य
February 16, 2022 santoshLeaveaComment on माइकल ज्याक्सन किन अर्लाम लगाएर से’क्स गर्थे ? थाहा पाउनुहोस् उनीबारे २१ रोचक तथ्य
काठमाडौ :पप संगीतका बादशाह माइकल ज्याक्सन हामीमाझ नभएपनि उनका गीत गुञ्जिरहेकै छन्। जसका कारण संगीतमा उनको आभाष हुने गर्छ। विश्व भरमा अरबौंको संख्यामा उनका प्रशंसक छन्। करौडौंले उनलाई आफ्नो आदर्श मान्छन्।माइकल ज्याक्सन एक सितारा, एक सुपरस्टार, एक चर्चित व्यक्तित्व, एक विवादास्पद, एक रहस्मयी मानव थिए। माइकलबारे केही रोचक तथ्य– १. माइकल ज्याक्सनले पप संगीतलाई एक […]